March | 2016 | AMAPHUPHO
By info on March 29, 2016 in amaphupho nezincazelo
Uma uphupha ukuthi ubuso bakho bukhulu futhi buvuvukele uzozithola ucebile futhi uthole udumo ekusaseni lakho kodwa uma buphaphathekile noma bunciphile ungaba senkingeni maduzane nje. Uma ubugeza udinga ukuphenduka ulungise into oyenzile. Uma ubona ubuso bakho kubukeka njengomunye umuntu kungenzeka ukuthi uzothuthela emzini omusha noma emsebenzini omusha maduzane.
By info on March 22, 2016 in amaphupho nezincazelo
Uma uphupha ukuthi uphuke amathambo ngemvamisa kusho ukuthi kuzoba nezikhathi ezinzima ezizayo ekusaseni lakho. Uma kuwukuthi yimilenze yakho ephukile kusho ukuthi uzoshada nomuntu ongenawo amandla. Uma ungowesifazane kusho ukuthi umyeni wakho uzoba yivila nesidakwa esingakwazi ukukusekela. Uma ungowesilisa kusho ukuthi unkosikazi wakho uzoba ngumuntu olungile kodwa angabi namandla anele okunakekela umuzi.
By info on March 15, 2016 in amaphupho nezincazelo
Uma uphupha ukuthi izinzipho zakho sezikhulile zaba zinde kusho ukuthi inhlanhla nengcebo kusendleleni. Kungcono kakhulu uma uphuphe umyeni noma unkosikazi onezinzipho ezinde ngoba lokhu kusho ukuthi bazosebenza kanzima futhi bakusekele. Kepha uma uphupha ngezinzipho ezimfushane kusho ukuthi kukhona okuzokulahlekela maduzane. Kodwa ke uma zimfushane ngoba uzigunda ephusheni lakho kusho ukuthi uzoxabana nelungu lomndeni wakho.
By info on March 1, 2016 in amaphupho nezincazelo
Uma uphupha lina incazelo iya ngokuthi inamandla kangakanani futhi sekuyisikhathi esingakanani lina. Imvula ejwayelekile isho ukuthi uzothola okuthile ngokushesha Đ kungaba isipho. Uma kuyisivunguvungu kunezikhathi ezinzima eziza kuwe. Kuyoba nenkohliso kanye nokungajabuli empilweni yakho kodwa uma wenza ngokuhlakanipha uyophumelela ekugcineni. Uma uphupha ukuthi imvula isimile futhi nelanga seliphumile kusho inhlanhla ekusaseni lakho.